Igbo, John: Lesson 096 - Mmụọ Nsọ na-ekpughe ihe ndị mere eme kachasị mkpa (Jọn 16:4-15) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 096 (The Holy Spirit reveals history's developments)
4 Ma agwawom unu ihe ndia, ka unu we cheta na agwaram unu ihe bayere ha. M'gaghi-agwa gi ihe ndia site na mbu, n'ihi na Mu onwem nọyere gi. Ma ub͕u a anamagakuru Onye ziterem, ọ dighi kwa onye ọ bula nime unu nājum, Òle ebe unu nāla? 6 Ma n'ihi na agwawom unu ihe ndia, obi-unu juputara n'obi-unu. 7 Otú o sina dị, ana m agwa gị eziokwu: Ọ ga-abara gị uru na m ga-ala, n'ihi na ọ bụrụ na anaghị m apụ, Onye Ndụmọdụ ahụ agaghị abịakwute gị. Ma ọ buru na Mu onwem aga, M'gēziga Ya nye unu.
Ná mmalite, Jizọs ekwughị banyere ihe isi ike, nhụjuanya na mkpagbu na ndị na-eso ụzọ ya, kama ọ gwara ha na eluigwe meghere, ndị mmụọ ozi na-arịgo ma na-arịdakwasị Nwa nke mmadụ. Ha ji obi ụtọ mara ike Chineke na-arụ ọrụ n'ime Ọkpara ka ọ rụọ ọrụ ebube. Nke nta nke nta, ndị isi na-eme ka àgwà ha sie ike megide ya na ìgwè mmadụ ahụ hapụrụ ya n'ihi egwu ndị Juu. Ọ dịghị onye ọ bụla fọdụrụ ya ma e wezụga ndị na-eso ụzọ ya, bụ ndị ọ na-aga ịlakwuru Nna ya nke eluigwe. Ekem enye ama etịn̄ aban̄a ukụt ye n̄kpa emi esịt ekenyenede esịt. Ha enweghị ike ịhụ ihe ebumnuche ma ọ bụ echiche nke ahụ ga-abụ agbamume n'ọdịnihu. Ma ha chọpụtara na ya ekwughị ihe ọ bụla banyere ihe mgbu ya, ịta ahụhụ na ọnwụ; naanị ihe ọ gwara banyere ọpụpụ ya na Nna ya dị mma. Ha jụrụ, "Olee ebe ị na-aga?" Ha enweghi ike icho ya ka o rigoro n'elu igwe, na acho ya ka ya na ha biri. Jizos zaghachiri nke oma na odi nkpa ka ha rapu ha, n'ihi na obugh na obe agagh enye ya.
Naanị site na ime ka Chineke na mmadụ dịghachi ná mma, na mkpuchi nke mmehie site n'ọnwụ nke Nwa Atụrụ Chineke na-eme ka ọ bụrụ onye nnọchianya, ike nke ike Chineke ga-emeghe ma bakwasị ụmụazụ ya. Jizos emezuwo ezi omume niile ka ewee wukwasi ha obi na ihn'anya nke Chineke. Ọnwụ Jizọs bụ ntọala nke Ọgbụgba Ndụ Ọhụrụ, ma nye gị ikike inwe mmekọrịta na Chineke. Mmụọ Nsọ na-arụpụta ihe a ma na-akasi gị obi, na-emesi gị obi ike na Chineke nọnyeere gị na n'ime gị.
8 Mgbe ọ ga-abịa, ọ ga-ama ụwa ikpe banyere mmehie, banyere ezi omume, na ikpe; 9 banyere mmehie, n'ihi na ha ekweghi na m; 10 banyere ezi omume, n'ihi na Mu onwem nālakuru Nnam, unu agaghi-ahukwam ọzọ; 11 banyere ikpé, n'ihi na ekpewo onye isi nke ụwa a ikpe.
Mmụọ nwere ike ịkasi ndị na-eso ụzọ obi, n'ihi na ọ na-emeghe anya nke ndị kwere ekwe ma na-ekpe ikpe nke ndị na-ekweghị ekwe na-adabere n'ụkpụrụ ndị a.
Mmụọ nsọ na-akụziri anyị ihe mmehie na ogo ya pụtara. Tupu Kraist abia, nmehie bu njehie nke iwu nke iwu na odigh ime uche Chineke. A na-ewere nke a dịka nnupu isi na enweghị ntụkwasị obi na ịhụnanya - ndụ na-enweghị Chineke ma na-emegide ya. Mmehie niile bụ omume ha, mmekọrịta mmadụ ma ọ bụ nke mmụọ ka a na-ewere dị ka imebi ebube Chineke. Mgbe obe gasiri, ihe a putara nime madu dika nmehie nke madu neme, nke ahu bu iju Jisos Kraist dika onye nzoputa onwe ya, ma obu n'okwu ndi ozo, icho amara amara nke Chineke. Onye ọ bụla nke na-agbaghara Jizọs n'efu, nkwulu megide Onye Nsọ ahụ, na onye na-agaghị ekwenye na Chineke dị ka Nna na Jizọs Ọkpara Ya bụ onye iro nke Atọ n'Ime Otu. Chineke bụ ịhụnanya, onye ọ bụla nke na-ajụkwa ịhụnanya ahụ nke e gosipụtara na Kraịst mere mmehie efu nke na-ekewapụ ya na nzọpụta.
N'osisi Kraist mezuru nzọpụta nke ụwa. Ọ dịghị mkpa ịnwụ ọzọ, n'ihi na ọ gbaghaara mmadụ niile nmehie ha niile n'oge ọ bụla. A na - eme ka mmadụ nile bụrụ ndị ezi omume site na amara na ọbara Kraịst. Ọ dị ka nnukwu onye nchụàjà; ozi ya gụnyere mpaghara atọ: Nke mbụ, igbu onye ahụ. Nke abuo, onyinye nke ọbara na ebe nsọ kachasị nsọ, na-eguzo maka ịme mkpuchi mmehie n'ihu Chineke. Nke ato, ịtụkwasị ngọzi nye ọtụtụ ndị kwere ekwe na-eche ya. Ihe a nile ka Jizos mere. Site n'onyinye a ọ na-awụpụ ngọzi nke Mmụọ Nsọ maka ya iji mesie anyị obi ike na anyị bụ ndị ezi omume. Mbilite n'ọnwụ na ịrịgo Kraịst mezue ezi omume anyị ebido n'elu obe.
Jizos egosigh ihe obula nke ikpe nke uwa dika nkedo nke ndi n'ekwegh ekwe rue oku oku, ma hu kwa ikpe nke ikpe ahu n'ibibi Setan na ohu ya. Ọ bụ onye na-adọta ihe a kpọrọ mmadụ site na mmekọrịta nke ịhụnanya Chineke. O kere ha n'agbụ nke ịkpọasị, mee ka ha bụrụ ụmụ ekwensu juputara na atụmatụ aghụghọ.
Jizos n'idi n'wa n'elu ala wee jee ije n'obi umeala wee kwue mpako nke onye ah. Ịhụnanya Ọkpara ahụ na-egbochi Onye Ọjọọ. Mgbe Jisos tinyere mmuo ya n'ime aka Nna ya, o meriri ochichi nke Setan gbasaworo. Jizọs bụ Onye Iro, n'agbanyeghị na o siri ike. Ikwesị ntụkwasị obi ya rue ọnwụ bụ ikpe banyere Setan ma merie ya. Anyị na-ebi mgbe oge mmeri a dị. Anyị na-ekpe ekpere Nna ahụ, "Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, kama napụta anyị n'aka ajọ omume," dị ka anyị na-enweta ihe nrite nke mmeri Kraịst na nchekwa na mmesi obi ike.
EKPERE: Daalụ, Onyenwe anyị Jisọs, n'ihi na ị lụọ ọgụ ọma, ma nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n'ịdị umeala n'obi, ịhụnanya na olileanya. Anyị na-ekelekwa gị na ị gakwuuru Nna ahụ ma mechaa ka anyị kwenye. Anyị na-enwe obi ụtọ ma na-eto gị na Hallelujah, n'ihi na ị tinyere ngọzi nke àjà gị n'ime anyị site na Mmụọ Nsọ. Debe anyị n'ịhụ ezi omume gị n'anya, ka onye iro wee ghara ịchọta anyị. Naputa ayi n'aka Setan, ka ala-eze-gi bia, ka ewe do kwa aha Nna-ayi nsọ n'elu uwa nile.
Page last modified on March 05, 2020, at 06:38 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)